ne admin pane 20-08-27
Pakave nemabhodhoro egirazi munyika yangu kubvira kare. Munguva yakapfuura, madenderedzwa edzidzo vaitenda kuti giraziware raive risingawanzoitika munguva dzekare, saka rinofanirwa kunge riri rayo chete uye richishandiswa nemazana mashoma ekutonga. Nekudaro, ongororo dzichangoburwa dzinotenda kuti yekare giraziware haina kuoma kuburitsa ...
Unoziva here? Kune akawanda marudzi emabhodhoro egirazi
ne admin pane 20-06-28
Hunhu nemhando dzemabhodhoro egirazi: mabhodhoro egirazi ndiwo makuru ekurongedza midziyo yezvikafu, zvemishonga uye zvemakemikari maindasitiri. Ivo vane yakanaka makemikari kugadzikana; nyore kusimbisa, yakanaka mweya kuomarara, uye pachena, uye zvirimo zvinogona kucherechedzwa kubva kunze; kuchengetedza kwakanaka ...
Kugadzirwa kwemaitiro emabhodhoro egirazi anonyanya kusanganisira: ① Raw zvinhu pre-kugadzira. Kupwanya zvinhu zvakawandisa zvigadzirwa (jecha re quartz, soda ash, limestone, feldspar, nezvimwewo) kuomesa zvinhu zvine hunyoro mbishi, uye kubvisa izvo zvine simbi zvigadzirwa kuti uve nechokwadi chegirazi. Kugadzirira kwe ...